Saịprọs napụrụ ndị mba ọzọ 45 paspọtụ onye na -etinye ego Visa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saịprọs » Saịprọs napụrụ ndị mba ọzọ 45 paspọtụ onye na -etinye ego Visa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Saịprọs • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Saịprọs napụrụ ndị mba ọzọ 45 paspọtụ onye na -etinye ego Visa.
Kọmịshọna Europe katọrọ Saịprọs maka inye akwụkwọ ikike ngafe ndị a, na -ekwu na "ụkpụrụ European abụghị maka ire ere," na -ebo atụmatụ nke "ire nwa amaala Europe maka uru ego."
Saịprọs kpebiri iwepu nwa amaala Saịprọs maka ndị ọchụnta ego 39 na ndị ezinụlọ 6.
Saịprọs na -enyochakwa ikpe isii ọzọ, ma tinyekwa 47 ọzọ na nleba anya na -aga n'ihu.
Saịprọs kwenyere na Ọktọba afọ gara aga ka ọ kwụsị atụmatụ Visa Golden na Nọvemba 1, 2020.
Ndị ọrụ gọọmentị Saịprọs kwuru taa na ha ga-echeta nke ọma akwụkwọ ikike ngafe maka 'Citizensmụ amaala' nke 'Gold Visa' site n'aka ndị ala ọzọ 39 nwetara nzere Saịprọs n'okpuru atụmatụ itinye ego ihere. A ga -anapụkwa mmadụ isii n'ime ndị ha tụkwasịrị obi paspọtụ Saịprọs ha.
Cyprus Ndị kansụl minista ekwupụtala mkpebi iwepụ “ụmụ amaala Saịprọs maka ndị ọchụnta ego 39 na ndị ezinụlọ 6,” na -akọwaghị aha ndị ọ metụtara.
A na -ekwukwa na gọọmentị na -enyocha okwu aghụghọ isii ọzọ, wee tinye 47 ọzọ "n'okpuru nleba anya na -aga n'ihu… na usoro enyere."
Saịprọs kwetara na Ọktoba afọ gara aga ịkwụsị ya Atụmatụ Visa Goldene na Nọvemba 1, 2020, nke nyere ndị mba ọzọ ohere ị nweta ikike obibi na ikike nwa amaala maka itinye ego nde mmadụ na mba ahụ. Iji ruo eru, ndị mmadụ n'otu n'otu ga -etinye, opekata mpe, tinye million 2 nde ($ 2.43 nde) na akụrụngwa Saịprọs n'elu onyinye enyere ego nyocha gọọmentị.
Atụmatụ, akpọrọ ego maka nwa amaala, a na -eche na ọ bulitere billion 7 ijeri ($ 8.12 ijeri) tupu gọọmentị anabata ya na ọ mepere “nrigbu mkparị.”
Ihe dị ka mmadụ 7,000 chere na ha nwetara ikike ịbụ nwa amaala n'okpuru atụmatụ a tupu emechie ya, ebe gọọmentị họpụtara kọmitii mechara chọpụta na ihe karịrị 53% nke ndị natara akwụkwọ ikike site na usoro a mere n'ụzọ iwu na -akwadoghị.
Ozugbo mmadụ nwetasịrị paspọtụ Saịprọs, ha ga -enwe ike ịga njem, rụọ ọrụ ma biri na mba ndị ọzọ so na European Union. Na mbụ, European Commission katọrọ ya Cyprus maka inye akwụkwọ ikike ngafe ndị a, na -ekwu na "ụkpụrụ European abụghị maka ire ere," na -ebo atụmatụ nke "ire nwa amaala Europe maka uru ego."